Sidee Kor Ugu Qaaddi Kartaa Caafimaadka Dheefshiidkaaga? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — April 4, 2020
Dadka dunidaan ku nool inta badan waxa ay ka cawdaan dhibaatoyin caafimaad daro oo la xariiro dheefshidka, waxaana kamid; Calool fadhiga, Shubanka,Mataga, dhibirada,laabjeexa IWM.
Dheeshiidka waxa uu kamid yahay hab-dhisyadda jirka ugu waaweyn waxa uu ka billowda Afka waxa uuna ka dhammaada malawadka( Saxaro saarka).
Haddaba Sidee Ayaad Kor U Kor U Qaaddi Kartaa Caafimaadka Dheefshiidkaaga?
Waxaa jiro wax-yaallo badan oo haddii aad sameyso kor u qaadi kara caafimaadka dheefshiidkaaga waxaana kamid ah:
Cunista Cunnooyinka Qolofta Leh waxa ay wanaajiyaan caafimaadka dheefshiidka, waxayna ka hortagga calool fadhiga. Soomalida waxa ay ku maahmaahda “ Cool fadhida cudur kama horeeyo”. Sidoo kale cunnada qolofta leh waxa ay ka qeyb qaadataa dhimista miisaanka, iyo yareenta baabasiirka. Cunnooyinka qolofta leh waxaa kamid ah: Babaayga, Qamadiga, kaarootada, Digarta, Canbaha IWM.
Cabista Biyaha, biyaha waxa ay fududeyaan shiiditaanka cunnada, waxa ay wanaajiyaan dhaq-dhaqaaqa mindhicirada. Haddii aad isku aragto madax xanuun, daal, lalabo, iyo dhidid, ogow jirkaaga waxa uu ubbaahan yahay biyo.
Isticmaalka Sokorta Iyo Cusbada Oo La Yareeyo waxa ay ka qeyb qaataan kor u qaadista caafimadka dheefshiidka, haddii aad badsato sokorta ama cusbada waxaa laga dhaxlaa calool xanuun iyo dheefshiidka oo waqti badan qaato.
Jimicsi Ugu Yaraan Maalintii 30 Daqiiqo Ah, jimicsiga joogtada ah waxa uu yareeyaa walwalka, waxa uuna xakameeyaa culeyska, waxa uuna caawiyaa xiidmaha inay si caadi ah u shaqeeyaan.
Yaree Cabista Badan Ee Kafeegga, Kafeegga waxa uu kordhiyaa aasidka caloosha taaso sababta in aad laab-jeex aad dareento.
Qaaddo nasiinno badan, jirka Aadanaha waa mid isku xiran, haddii ay cabsi ay ku gasho ama aad murugeysan tahay marna kuma qabanayso baahi. Mar waliba waxaa wanaagsa in aad shacuurtaada illaaliso,sidoo kale nasiinada waxa qeyb lixaad leh ka qaaddataa kor u qaaddid caafimaadka dheefshiidka.
Tags: Sidee Kor Ugu Qaaddi Kartaa Caafimaadka Dheefshiidkaaga?
Next post Sida Ugu Fudud Ee Qofi Ku Caawin Karo Bulshadiisa
Previous post Maxaa Sababo Xubnha Jirka Inay Bararaan?